ho mirazotra roa azo ifanenana ary hahafahana maka ny ampahan-tany voakasiky ny tetikasa na amin’ny alalan’ny fampiraharahana na amin’ny fanesorana noho ny antony filan’ny ho an’ny tombotsoam-bahoaka (expropriation pour cause d’utilité publique) ». Toy izany ihany koa raha tsiahivina ny tsy maintsy hanalana amin’ny fianankaviana maro noho ny fanamboarana ny lala-manitsy na ny “Nouvelle Rocade” miainga eny amin’ny Marais Masay mipaka any amin’ny By Pass. Honeran’ny fanjakana ny fanesorana amin’io. Miankina amin’ny tombam-bidin’ny fananana ho rava ny fanonerana, ary nambara efa volana vitsy izay fa ny 20% amin’ny dingana araka ny lalàna hahafaha-manala ireo olona no efa vita. Niahiahy fatratra amin’io resaka fanonerana io anefa ny ankamaroan’ireo tsy maintsy horavana ny tranony noho ny fahabetsahan’ny dosie sy ny famoronana sy fanamboarana azy ireny. Mety hiala maina ireo feno na tsy ara-dalàna ny dosie.